परीक्षा सरेको सर्‍यै, शिक्षाविद् भन्छन्, ‘अन्योलमा राखिनु अपराध हो’
‘छोरोले त पढ्नै बिर्सेलाजस्तो भैसक्यो ।’
गौरीघाटकी अनिता चालिसेको दुखेसो हो यो । मोक्षदा स्कुलमा पढ्ने उनका छोरा स्कुल बन्द भएदेखि घरमै छन् । पहिला फुर्किंदै स्कुल पढ्न जाने छोरो आजभोलि अनलाइनमा भने पढ्न नरुचाउने उनी बताउँछिन् । बल्लबल्ल पढ्न राखे पनि छोरा आहनको ध्यान पढाइमा नगएको उनको गुनासो छ ।
‘शिक्षकशिक्षिकाले पढाएको बुझ्दैन, अनि मलाई सोध्छ । फेरि आफूलाई त्यस विषयको ज्ञान हुँदैन,’ अनिता चिन्तित सुनिइन्, ‘खै कसरी पो पढाउने हो ?’
अनिताको चिन्तालाई स्वाभाविक ठान्छिन्, आहनकी शिक्षिका रश्मी बस्नेत । गत सालको लकडाउनमा पनि अनलाइन कक्षा खासै प्रभावकारी नभएको उनको अनुभव छ । ‘जुममा पढाउँदा विद्यार्थीहरू म्युट गरेर अन्तै गफ लडाउँछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘अब जति कराए पनि ध्यान नदिएपछि के गर्नु ? सायद विद्यार्थीलाई पनि अनलाइनमा बुझ्न कठिन भएर ध्यान नदिएको होला ।’
यस्तो समस्या निम्नमाध्यमिक तहदेखि उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका सबैले झेलिरहेका छन् । एकातिर कोरोना महामारीले घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर शैक्षिकसत्रलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती पनि ।
तर, यस्तो विषम परिस्थितिमा सरोकारवाला निकायहरू भने मौन देखिन्छन् । आवश्यकताअनुसार तत्काल कुनै निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । अनि तिनै निकायको लाचारीपनको सिकारमा परेका छन्, आमविद्यार्थी ।
दुई वर्षदेखि स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा रोकिएको अवस्था छ । दोस्रो तहको परीक्षा पनि चल्दाचल्दै बीचमै रोक्नुपर्‍यो । तर, सरोकारवाला निकाय भने परीक्षा रोकेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेझैँ चैनले निदाइरहेका छन् ।
पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक दोस्रो तहमा अध्यनरत सुवास श्रेष्ठ आफ्नो उच्च शिक्षा कहिले सकिने हो भन्नेमा अन्योल छन् । उनी भन्छन्, ‘तनाव भैसक्यो, परीक्षा पनि दिँदादिँदै छोड्नुपर्‍यो । अब के हुने भनेर त्रिविले पनि ठोस निर्णय दिँदैन ।’
शंकरदेव क्याम्पसका पावेल पोखरेलले पनि परीक्षा कुरेर बसेको दुई वर्ष हुन लाग्यो । यतिबेला स्नातक दोस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका हुनुपर्ने उनी प्रथम वर्षमै अड्किएका छन् । ‘न परीक्षा हुन्छ, न परीक्षाको कुनै विकल्पबारे त्रिविले केही बताउँछ’, उनी आक्रोशित हुन्छन् । वैकल्पिक उपाय अपनाएर आफूहरूलाई पार लगाउनुपर्ने उनको मत छ ।
त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक शिवलाल भुसाल भने अनुकूलता हेरेर आवश्यक निर्णय लिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘के गर्ने भनेर अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । परिस्थिति हेरेर निर्णय गरिनेछ ।’
तर, यसरी विद्यार्थीलाई बिचल्लीमा छोडेर निदाइरहेको त्रिविलगायत अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुखलाई जनावरको संज्ञा दिन्छन्, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला । तत्काल निर्णय गरेर विद्यार्थीलाई अगाडिको बाटो देखाउन नसक्नु लाजमर्दो विषय भएको उनको भनाइ छ ।
‘यसरी विद्यार्थीलाई अन्योलमा राखिनु त्रिविको अपराध हो । यसको जिम्मा कसले लिने ?,’ उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘शिक्षक महासंघले सुझाव दिनुपर्ने होइन ? प्याब्सन एनप्याब्सनले यसरी गर्छौँ भनेर हिम्मत गर्नुपर्ने होइन ? विश्वविद्यालयका भीसी, रेक्टरले जिम्मा लिनुपर्ने होइन ? खै त ?’
यही बेला शिक्षण विधि र मूल्यांकन पद्धतिलाई बदल्नुपर्ने कोइरालाको राय छ । ‘अनलाइनमा आउनेलाई त्यहीँबाट प्रश्न दिनुपर्छ । केही पनि नभएकालाई प्रोजेक्ट वर्क दिनुपर्छ,’ उनी सुझाउँछन्, ‘यसरी जाँच लिने तरिका अपनाउने हो भने न जाँच रोकिन्छ, न यो शैक्षिकसत्रको अवधि बढाउनुपर्छ ।’
पढाइलाई व्यवहारमा जोड्ने र सिकाइलाई पाठमा जोड्न सक्ने हो भने यस्ता समस्यामा कमी आउने उनी बताउँछन् ।
‘पढ्नलाई अनलाइन मात्र चाहिन्छ भन्नु नचाहिने कुरा हो । सबैले जे छ, त्यहीबाट पढ्नुपर्छ । जस्तैः आरनमा पुगेको बेला त्यही पढ्ने हो, खेतमा कीरा फट्याङ्ग्रा भेटिए त्यही पढ्ने हो ।’ तर, सबैतिर यो ट्रेण्ड बसाउन गाउँगाउँका शिक्षकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने कोइराला बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २०, २०७८, १५:००:५१